Hopin: Toerana virtoaly hitarihana fifandraisana amin'ny hetsika an-tserasera | Martech Zone
Raha nitondra hetsika virtoaly ny lockdowns, dia nanatsara ny fanekena ireo hetsika an-tserasera ihany koa izany. Zava-dehibe amin'ny faneken'ny orinasa izany. Na dia mety hiverina aza ny hetsika manokana amin'ny maha-mpivarotra tsikombakomba sy fivarotana marketing ho an'ny orinasa, dia azo inoana koa fa ny hetsika virtoaly dia hitohy ho ekena ary ho lasa fantsona manan-danja ihany koa.
Na dia manolotra fitaovana azo ampiharina hananana fivoriana na webinar tokana aza ireo sehatra fihaonana virtoaly mahazatra, ireo fitaovana ireo dia tsy mahavita manome sehatra ankapobeny izay mandrakotra ny endri-javatra rehetra amin'ny fihaonambe virtoaly. Ilay namako akaiky Jack Klemeyer nizara fitaovana iray izay ampiasain'ny orinasany coaching hanova ny fihaonambe isan-taona ho an'ny iray virtoaly… Hopin.
Hopin: ny toerana virtoaly amin'ny hetsika rehetra
Hopin dia toerana virtoaly misy faritra maro ifanakalozana izay manatsara ny fifandraisana sy ny fandraisana anjara. Afaka mivezivezy sy mivoaka ny trano ny mpanatrika toy ny hetsika manokana ary mankafy ny atiny sy ny fifandraisana noforoninao ho azy ireo.
Hopin dia namboarina mba hamerina hanana traikefa an-tsehatra manokana, raha tsy misy ny sakana amin'ny dia, toerana, toetrandro, fivoarana tsy dia mazava, fijanonana sns. Miaraka amin'i Hopin, ny orinasa, ny vondrom-piarahamonina ary ny fikambanana dia afaka manatratra ny mpijery manerantany, mivory amin'ny toerana iray, ary mahatsiaro ho kely indray ny hetsika an-tserasera goavambe.
Ahitana endri-javatra Hopin
Fandaharam-potoana - inona no mitranga, oviana ary fizarana iza no manaraka.
fandraisana - pejy fandraisana na fandraisana ny hetsikao. Eto ianao dia afaka mahita haingana izay mitranga amin'ny hetsika amin'izao fotoana izao.
Stage - hatramin'ny 100,000 ny mpanatrika dia afaka manatrika ny fampisehoana ataonao. Mandefasa mivantana, milalao atiny efa voarakitra an-tsoratra, na stream amin'ny alàlan'ny RTMP.
Sessions - hatramin'ny 20 ny mpanatrika dia afaka amin'ny efijery iray miaraka amina mpanatrika an-jatony mijery sy mifampiresaka amin'ny fotoana tsy voafetra izay afaka mihazakazaka miaraka. Tonga lafatra ho an'ny boriborintany, tetikasa na fifanakalozan-kevitra ataon'ny vondrona.
Lisitry ny mpandahateny - hampiroborobo izay miteny amin'ity hetsika ity.
fifaneraserana - fahafaha-manao fivoriana mandeha ho azy hahafahan'ny mpanatrika, mpandahateny, na mpivarotra miantso video iray.
Chat - Resadresaka fisehoan-javatra, resaka an-tsehatra, resadresaka fivoriana, resaka amin'ny booth, resaka fihaonana, resaka an-tserasera ary hafatra mivantana no tafiditra ao. Ny hafatra avy amin'ny mpikarakara dia azo apetaka ary asongadiny mba hahafantarana azy mora foana amin'ireo mpanatrika.
Trano fampirantiana - ampidiro ny trano fivarotana mpivarotra mpanohana sy mpiara-miombon'antoka raha afaka misy mpizaha hetsika mandehandeha hitsidika ireo trano heva mahaliana azy ireo, mifanerasera amin'ireo mpivarotra, ary handray andraikitra. Ny booth tsirairay amin'ny hetsikao dia mety ahitana horonantsary mivantana, atiny misy marika, rohy Twitter, horonantsary efa voarakitra an-tsoratra, tolotra manokana, mpivarotra amin'ny fakantsary mivantana ary CTA bokotra namboarina.
Logo mpanohana - logo azo tsindriana izay mitondra mpitsidika ny tranokalan'ny mpanohana anao.
Varotra tapakila - fanoratana tapakila sy fanodinana fandoavam-bola miaraka amin'ny kaonty mpivarotra Stripe.
URL nanafoanana - omeo fidirana iray tsindry iray ho an'ny mpanatrika ny faritra rehetra amin'ny hetsika iray ao Hopin.
Hopin dia sehatra hetsika iray ao anaty iray nohamarinina mba hampifandray ireo mpandahateny, mpanohana ary mpanatrika anao. Ireo mpikarakara dia afaka mahatratra ny tanjon'ny hetsika ivelan'ny Internet amin'ny alàlan'ny fanaingoana ny hetsika Hopin mba hifanaraka amin'ny fepetra takiana, na hetsika fandraisana olona 50, fihaonan'ny tanana 500 olona iray na fihaonambe isan-taona olona 50,000 XNUMX.
Makà Demo Hopin
Tags: chat amin'ny hetsikatrano heva fampirantianahopinfihaonambe an-tseraserahetsika an-tseraseralisitry ny mpandahatenymivatravarotra tapakilavideo miantsofampirantiana virtoaly
Ivon-toerana Preferansa mailaka sy pejy hanafoanana: fampiasana ny anjara asa sy famoahana